Radio Don Bosco - SDB
Radio Don Bosco, 25 taona nanao tantsoroka ny tanora
Lohahevitra : SDB
Naseho ny : 28 jona 2021
Nankalazaina ny 27 jona 2021 ny taom-bolafotsin'ny Radio Don Bosco. Onjam-peo naorin'ny salezian'i Don Bosco tamin'ny taona 1996. Teny manentana mandritra ny fankalazana ny hoe : "Firotsahana sy hafaliana : mandehana mampianara ny firenen-drehetra" (Mt 28, 19).
Hafaliana miaraka amin'i Don Bosco
Nosoratan'i Randriamanampisoa Fanojoniaina Sitraka
Naseho ny : 4 febroary 2020
« Hasambarana sy hafaliana ho antsika rehetra ! », izay ny firariantsoa omen'i Frera Dieudonné Stéphane, sdb, misionera any Guatemala, amin'izao fanombohan'ny taona 2020. "Manantena aho fa tsara fanombohana ho anareo rehetra ity taona ity". Zarainy amintsika eto àry ireo zava-nitranga mahafinaritra niainan'izy ireo.